I-FAQ yokupheka ye-infrared - iZhongshan Amor Isixhobo soMbane Co, Ltd.
Uthini umahluko phakathi kwe-infrared kunye ne-induction Cooktops
Usenokuba udidekile malunga nokuba yintoni umahluko phakathi kwe-infrared kunye ne-induction cooktops…. Zombini iinketho bezikhe zajikeleza ixesha elithile, ke ukunceda ukucoca nakuphi na ukubhideka, makhe sijonge kwaye sixoxe ngeplathi eshushu ye-infrared vs induction plate eshushu kunye nendlela zombini zokupheka ezisebenza ngayo. Siza kuthetha malunga nokuba kutheni ukhetha kwaye usebenzisa ubushushu be-infrared lukhetho olungcono nolungabizi kakhulu. Kwaye siza kuxoxa ngezibonelelo zokupheka kwe-infrared. Ngaba uyathanda ukubona ezona ndawo zithandwayo zebhenti ye-infrared?
Yintoni i-Infrared Cooking?
Ukupheka kwe-infrared yindlela eluncedo yokupheka ukutya okusempilweni kunye nokugcina izondlo.
Ngokukhawuleza ukupheka uninzi lokutya- 3 x ngokukhawuleza kuneendlela zesiko
Ayivelisi ubushushu kwaye igcina ikhitshi lakho lipholile
Ukupheka ukutya kwakho ngokulinganayo, kungatshisi okanye kungabandi
Igcina ukufuma okuphezulu ekutyeni
Abapheki baphatheka kakhulu- Abapheki beBenchtop, ii-oveni zeetowaster kunye neepheki zodongwe zilungele
iikhitshi, ii-RV's, iphenyane, amagumbi okulala, inkampu
I-infrared BBQ's zincinci kakhulu ukuba zingasetyenziswa kwaye zitshiphu ukuziqhuba
Ngaba abapheki be-infrared bashushu banjani?
Izipheki zokupheka infrared zenziwe ngezibane ze-quartz zokufudumeza infrared kwisitya sesinyithi esikhuselwe ngumhlwa. Izibane zihlala zijikelezwe ngamakhoyili aqaqambileyo ukukhupha nobushushu obuqaqambileyo. Olu bushushu bukhazimlayo budlulisa ubushushu be-infrared ngqo embizeni. Uya kufumana i-infrared cooktops inokusebenza okuphezulu kwamandla kunee-coil zombane eziqinileyo ngokuphindwe kathathu ngaphezulu kokusebenza. Isibonelelo sabapheki be-infrared ngaphezulu kokupheka kokungeniswa: naluphi na uhlobo lweembiza kunye neepani zinokusetyenziswa. Ngompheki wokupheka, kufuneka upheke okhethekileyo.
I-Bill Best yaqulunqa i-infrared burner yokuqala ye-gesi ekuqaleni kwee-1960. UMthetho oYilwayo wayengumsunguli weNkampani yezoBunjineli boBushushu kunye nelungelo lokushicilela kwi-infrared. Yayisetyenziswa okokuqala kwimizi-mveliso nakwimizi-mveliso enje ngezityalo ezenza amavili kunye nee-oveni ezinkulu ezisetyenziselwa ukomisa ipeyinti yezithuthi ngokukhawuleza.
Ngama-1980, i-ceramic infrared grill yayenziwe nguBill Best. Xa wongeza i-ceramic infrared burner eyenziwe kwi-barbecue grate ayenzileyo, wafumanisa ubushushu be-infrared ukutya okuphekwe ngokukhawuleza kwaye wagcina amanqanaba aphezulu okufuma.
I-Infrared Grill isebenza njani?
Ubushushu be-infrared buhlala bukhona. Ii-ovuni ze-infrared zifumana igama lazo kwizinto ezifudumeza infrared ezikhoyo kumbindi wendibano yazo yokufudumeza. Ezi zinto zishushu zenza ubushushu obuqaqambileyo obudlulisela kukutya.
Ngoku kwilahle yakho yesiqhelo okanye kwi-grill enikwe amandla igesi, i-grill iyatshiswa ngokutshisa amalahle okanye igesi ethi ke itshise ukutya kusetyenziswa umoya. Iigrill infrared zisebenza ngokwahlukileyo. Basebenzisa izinto zombane okanye zegesi ukufudumeza umphezulu okhupha amaza e-infrared ngqo kukutya okusepleyitini, kwisitya okanye kwi-grill.
Yintoni Ukupheka ngokuKhupha?
Ukupheka kwe-Induction yindlela entsha yokufudumeza ukutya. Ukufakelwa kwee-cooktops zisebenzisa ii-electromagnets ngokuchasene nokuqhutywa kwe-thermal ukufudumeza imbiza. Ezi ndawo zokupheka azisebenzisi naziphi na izinto zokufudumeza ukudlulisa ubushushu kodwa zitshise ngokuthe ngqo kwisitya ngenxalenye ye-electromagnetic engaphantsi kwendawo yokupheka yeglasi. Intsimi ye-electromagnetic transfers current ngqo kwi-cookware yamagnetic, ibangela ukuba kushushu- kunokuba yimbiza okanye ipani yakho.
Isibonelelo soku kukufika kumaqondo obushushu aphezulu ngokukhawuleza okukhulu ngolawulo lobushushu kwangoko. Induction cooktops zinezibonelelo ezininzi kumthengi. Enye yezi yindawo yokupheka ayitshisi, ukunciphisa amathuba okutsha ekhitshini.
Isebenza njani i-Induction Cooking Work?
Abapheki bokungeniswa benziwe ngeengcingo zobhedu ezibekwe phantsi kwenqanawa yokupheka emva koko amandla ombane atshintshayo adluliswa ngocingo. Ukutshintshana okwangoku kuthetha enye egcina ukujika komgaqo. Le yangoku idala ukutshintsha kwemagneti yomhlaba eya kuthi ivelise ubushushu ngokungangqalanga.
Ungasibeka isandla sakho phezu kweglasi kwaye ngekhe uve nto. Ungaze ubeke isandla sakho esinye esisandula kusetyenziselwa ukupheka kuba kuya kushushu!
Izinto zokupheka ezifanelekileyo kubapheki bokungeniswa zenziwe ngentsimbi ye-ferromagnetic enje ngentsimbi okanye isinyithi. Ukubonelela ukuba usebenzisa i-ferromagnetic disk, ithusi, iglasi, ialuminiyam, kunye non-magnetic, ii-steels ezingenasici zinokusetyenziswa.
Kutheni ukupheka kwe-infrared kungcono? Ipleyiti eshushu ye-infrared VS Induction
Abantu bahlala bebuza umbuzo "wepleyiti eshushu ye-infrared vs induction" xa kufikwa ekusebenziseni amandla. Abapheki be-infrared basebenzisa i-1/3 yamandla angaphantsi kunanoma yimuphi umpheki okanye i-grills. Ukutshisa i-infrared kushushu ngokukhawuleza, kuvelisa amaqondo obushushu aphezulu kune-grill okanye umpheki wakho rhoqo. Abanye abapheki be-infrared bayakwazi ukufikelela kuma-980 degrees Celsius kwimizuzwana engama-30 kwaye banokugqiba ukupheka inyama yakho kwimizuzu emibini. Oko kukhawuleza kakhulu.
Abapheki be-infrared kunye ne-BBQ grills kulula kakhulu ukuzicoca. Cinga ngako konke ukungcola okokugqibela usebenzisa isitshisi okanye isipha samalahle…. Onke amacwecwe ekwakufuneka acociwe…. Izinto ezenziwe ngeceramic kwi-BBQ ye-infrared zifuna ukusulwa kwaye isitya se-benchtop cooker sihamba kwi-dishwasher.
Izibonelelo zokupheka okungafunekiyo?
Ukupheka kwe-infrared kuqinisekisa ukuba ubushushu buhanjiswa ngokulinganayo kwindawo yokupheka. Ubushushu obukhazimulayo bungena ngokulinganayo ekutyeni kwakho kwaye buqinisekisa ukuba ukufuma kuhlala kuphezulu.
Amaqondo obushushu asezantsi
Abapheki be-infrared bashushu ngokukhawuleza kakhulu. Siphakamisa ukuba ubukele ukutya ngokusondeleyo kwaye unciphise ubushushu xa kufuneka njalo. Kuya kufuneka ukhethe umpheki we-infrared oseto lobushushu olwahlukeneyo.
Abapheki be-infrared kunye ne-grills basebenzise malunga neepesenti ezingama-30 zepetroli ngaphantsi kombane wakho, igesi okanye i-charcoal grill. Oku konga imali kwaye kuncede okusingqongileyo. Fumana ukuba zeziphi ezi-5 zegrill infrared ezaziwa kakhulu apha
Ngenxa yokuba ii-infrared grills zishushu ngokukhawuleza, zipheka ngokukhawuleza. Ungayosa i-barbecue, inyama eyosiweyo, upheke isidlo kwaye wenze yonke into oyifunayo phantse amaxesha ama-3 ngokukhawuleza kunompheki oqhelekileyo.
Ngokukhawuleza kangakanani abapheki be-infrared?
Abapheki be-infrared banokunyuka ngaphezulu kwe-800 degrees Celsius kwimizuzwana engama-30. Bakhawuleza kakhulu. Kuxhomekeke kwimodeli kunye nohlobo lwenyani, unokufumana iimodeli ezicothayo. Qaphela ukuba inqaku lokuhambisa ubushushu nge-infrared kungenxa yesantya.
Izitshisi zegesi kunye nabapheki bamalahle baya kufuna ukuba ubushushu buqhutyelwe kwisitya sakho sokupheka kwaye ulinde ukuba inqanawa ishushu phambi kobushushu. Khawufane ucinge ukupheka i-barbecue kwimizuzu nje eyi-10 kwaye ube nencasa njengakuqala. Unokuthanda nokujonga amalahle egrill nawo
Ngaba uzifuna izixhobo ezizodwa?
Awudingi i-cookware ekhethekileyo njengoko besesitshilo. Njengabapheki abaqhelekileyo ungafumana iitoni zezincedisi onokuzifuna …… .. Njengezitya zeglasi ezizodwa zokupheka kwakho.
Ukuqukunjelwa kwintoni umahluko phakathi kwe-infrared kunye ne-induction Cooktops
Ukupheka kwe-infrared kunye nokupheka kwe-Induction zombini iindlela eziphambili zokupheka. I-infrared nangona kunjalo inika izibonelelo ezininzi njengoko ukutya kwakho kuphekwa ngokukhawuleza ngaphandle kokufaka ukutya kwakho ngomlotha okanye ngomsi. Abapheki be-infrared nabo balungile kwindalo esingqongileyo- ukusinceda sisebenzise ipetroli encinci ukuze sivelise ubushushu.